ညမင်းသား: Jul 17, 2012
အပြန်အလှန် မျက်နှာမြင် ပြောဆိုနိုင်သော အင်တာနက်ဖုန်း ပြောခြင်း လူကြိုက်များ
အင်တာနက်မှ တစ်ဆင့် အခမဲ့ဖုန်းခေါ် ဆိုနိုင်ပြီး အပြန် အလှန် မျက်နှာမြင် ပြောဆိုနိုင် သော အင်တာနက်ဖုန်း ပြောဆို ခြင်း၊ လူကြိုက် များလာပြန်ပြီ ဖြစ်သည်ဟု သုံးစွဲသူ များနှင့် ဖုန်း ခေါ်ဆိုရန်သုံးသည့် အသုံးပြုသူ များကပြောသည်။ အဆိုပါေapplication မှာTango ဖြစ်ပြီး အရုပ် ပါမြင်နိုင်သောကြောင့် သုံးစွဲသူ များ ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သုံးစွဲသူများက ပြော သည်။
ယခင်က အွန်လိုင်းပေါ်မှ တစ်ဆင့် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော Viber application ကိုသုံးစွဲရာမှ ယခု နောက်ပိုင်းတွင် အရုပ်ပါ မြင်ရ သည့်Tango ကို အသုံးပြုမှု များ ပြားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း အရောင်းဆိုင်တစ် ဆိုင်က “မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အင်တာ နက်ရှိတဲ့နေရာမှာအခမဲ့သုံးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ အခုကလူတွေသုံးလာတာများပါတယ်။ အရင်
Online ပေါ်မှာ ထိပ်ဆုံး သီချင်း ၁၀ဝ ကို တိုက်ရိုက် နားဆင်မယ်
တချို့က အင်တာနက် ဆိုင်ရောက် ရင် သီချင်းအေးအေး ဆေးဆေးနား ထောင်ပြီး လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်တတ် တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး သီချင်း ကို အေးအေး ဆေးဆေးနားထောင်ချင် တဲ့သူတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်သီချင်း ကောင်းကောင်းလေးတွေကို အင်တာနက် ပေါ်ကနေ Download ပြုလုပ်စရာမလို ဘဲ တိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်မယ့် ဆိုက် လေးကိုညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အဲဒီ ဆိုက်ပေါ်က တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ လူကြိုက် အများဆုံး Top ၁၀ဝ ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်း တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုက်ပေါ်ကနေပဲ သီချင်းကိုကြိုက်တယ် ဆိုရင် MP3 နဲ့ Video ဖိုင်တွေ ဒါမှ မဟုတ် Album တစ်ခုလုံးကို iTune၊ Amazon ပေါ်ကနေ ဝယ်နိုင်ဖို့လည်း
ယောကျာ်းလျာများနှင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာ လိင်ဆက်ဆံခြင်း
ဘာကြောင့် ယောကျာ်း လျာတွေ ဟာ လုံခြုံစိတ်ချ မှုရှိသော လိင်ဆက်ဆံ ခြင်းကို စဉ်းစား သင့်သလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့် ယောကျာ်း လျာတွေဟာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရနိုင် ခြေနှင့် မလိုချင်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင် နိုင်ခြေ နည်းပါးကြပါတယ်။ သို့သော် လည်း မိန်းမအချင်းချင်း လိင်ဆက် ဆံခြင်းဟာ အမြဲတမ်းတော့ လုံခြုံ စိတ်ချမှုရှိတယ်၊အ္တရာယ်ကင်းတယ် လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ယောကျာ်း လျာတွေဟာလည်း ယောကျာ်းများ နှင့်လိင်ဆက်ဆံသော အမျိုးသမီး များကဲ့သို့ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက် တတ်သော ရောဂါများ ကူးစက်ခံရ နိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ဆိုတာဘာပါလဲ
HIV အပါအဝင် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ ကူးစက် မခံရဘဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဆိုလို ပါတယ်။ ယောကျာ်းလျာတွေဟာ လည်း ထိုရောဂါတွေ မကူးစက်ခံရ အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သောအရည်များ ဥပမာ-သွေး၊ မိန်းမကိုယ်မှထွက်သောအရည်များ ကို လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် မိမိရဲ့ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်မှုမရှိအောင် ကာ ကွယ်ရပါမယ်။ှနထ အသပျ လို့ခေါ်တဲ့ လိင်ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းများကို ဝေမျှ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။ အကယ်၍ သုံး မယ်ဆိုရင်တော့ လိင်ဆက်ဆံဖော် ဟာ ကွန်ဒုံးအသစ်တစ်ခု သီးသန့် အသုံးပြုရပါမယ်။ ဖက်ခြင်း၊ ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ နှိပ်နယ်ခြင်း၊ မိမိ ဘာသာမိမိ လိင်ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်း တို့ကတော့ ယောကျာ်းလျာများ အတွက် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေနည်း ပါးစေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအပြု အမူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေယုန်စတဲ့ အချို့သော ရောဂါပိုးတွေဟာ အရေ ပြားချင်း ထိတွေ့မိရုံနဲ့ကူးစက်နိုင်ပါ သေးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ရောဂါ ပိုးကင်းစင်တဲ့သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ ကတော့ စိတ်အချရဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျာ်းလျာများ HIV ကူးစက် ခံရနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ဟာ ဘာပါလဲ
ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးသော်လည်း ပါးစပ်သို့မဟုတ် ခံတွင်းတွင် အနာတစ်ခုခု၊ ဒဏ်ရာ တစ်ခုခုရှိနေပါက HIV ကူးစက်ခံရနိုင် ခြေရာခိုင်နှုန်းဟာ မြင့်တက်လာပါ တယ်။ မိန်းမကိုယ်တွင် အနာတစ်ခု ခု ခံစားနေရပါက သို့မဟုတ် ရာသီ သွေးဆင်းနေစဉ် Oral Sex ပြုလုပ် ပါက ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားနေပါတယ်။
- လိင်ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းများကို ဝေ မျှသုံးစွဲခြင်း Vibrators ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများ မှာများသောအားဖြင့် မိန်းမကိုယ် အရည်များ၊ သွေးများ ပေရေနေ တတ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလျာများ ဟာ ထိုအရာများကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း မပြုဘဲ တစ်ယောက်တစ်ခုစီ အသုံးပြု ရန် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ထိုပစ္စည်းတွေကို အမြဲတမ်းသန့်ရှင်း ရေးပြုလုပ်ပေးပြီး သန့်စင်အောင်ထား ရှိရပါမယ်။
- ကြမ်းတမ်းစွာလိင်ဆက်ဆံခြင်း ကြမ်းတမ်းစွာလိင်ဆက်ဆံခြင်း ကြောင့် ဒဏ်ရာအနာတရရပြီး သွေး ထွက်သံယိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း HIV ပိုးကူးစက်ခံရနိုင် ခြေများစေတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
-လှူဒါန်းထားသောသုက်ပိုးကိုရယူခြင်း ယောကျာ်းလျာတွေဟာ ကလေး
ဘန်ကောက် ဆေးရုံကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဆေးရုံခွဲ ဖွင့်လှစ် မည်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ဆေးရုံ အုပ်စုကြီး ဖြစ်သော Bangkok Dusit Medical Services (BGH) ဘန် ကောက်ဒူး ဆစ်ဆေး ဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်း ကနဦး လေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ဆေးရုံ ခွဲတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများအား အနီး ကပ်လေ့လာလျက်ရှိပြီး ၄င်းအပေါ်တွင် အခြေခံကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟာဗျူ ဟာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ရင်းနှီးမှုများအတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိ ပါက
ကာတွန်း ရုပ်ရှင်ဟာ တစ်ပုံချင်းမှာ ကောင်းဖို့ လိုအပ်သလို ရှေ့နောက်ပုံတွေ ပေါင်းစပ် ဖော်ပြတဲ့နေရာ မှာလည်း အသက်ဝင်အောင် ဖော်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကာတွန်းရုပ်ရှင် စတင် ဖန်တီးခဲ့ သူတွေကို ချီးကျူးဖို့ကောင်းသလို တကယ်လည်း အတုယူဖို့ကောင်းလှပါ တယ်။ သူတို့တွေသာ ဖန်တီးမှုကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ရင် ယနေ့ အချိန်မှာ ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းတွေ ကြည့်ရှုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သက်မဲ့ရုပ်သေ တွေကို အမှန်တကယ် လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ အသက်ဝင်တဲ့ အရုပ်လေးတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာ animation ပညာရပ်ပါပဲ။ အခုဒီဝက်ဘ်ဆိုက် လေးမှာတော့ လငိနသ သင်ခန်းစာတွေကို
ဓာတ်ပုံ - www.firstpost.com
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီးလို့ နာမည်ကြီး FHM အမျိုးသားမဂ္ဂဇင်းက ၄ နှစ်ဆက်တိုက် မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဘောလီးဝုဒ် (Bollywood) ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချော ကက်ထရီနာ ကာ့ဖ် (Katrina Kaif) ဟာ ဒီနေ့ဆိုရင် အသက် ၂၈ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်မိခင်နဲ့ အိန္ဒိယဖခင်တို့က ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကက်ထရီနာဟာ ဟောင်ကောင်မှာမွေးပြီး အင်္ဂလန်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကက်ထရီနာဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ Boom ရုပ်ရှင်နဲ့ ဘောလီးဝုဒ်လောကထဲကို
Interview with Actor Ye Deight about his Convertion of Religion !!!
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးသူ ဦးခင်မောင်လှ ရန်ကုန်မှာ တိမ်းရှောင်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မှာ အဓိက အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စေအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ဖန်တီးပေးသူဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလီမူဆလင် ဦးခင်မောင်လှသည် ရန်ကုန်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂလီမူဆလင်-ရခိုင်အဓိကရိုဏ်းတွင် အဓိက ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဦးခင်မောင်လှသည် စစ်တွေမြို့ နာဇီဈေးတွင် ဈေးအကောက်ခွန်ကို လေလံဆွဲထားသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ယင်းဈေးတွင် နွားသတ်လိုင်စင်ကို အာဏာပိုင်များဖြင့်ပူးပေါင်း၍ ၁၀နှစ်ကျော်ခန့် ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
“သူက နာဇီဈေး (စက်ရုံစုရပ်ကွက်)မှာ -၁၀-နှစ်ကျော်လောက်နွးသားသတ်လိုင်စင်ကို ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ကပ်ပေါင်းပြီး တဦးတည်းလေလံဆွဲခွင့် ရထားသူဖြစ်တယ်။ ငွေကြေးတောင့်တင်းသူမို့ရဲ တွေထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ
iPad ကို စိန်ခေါ်မယ့် Surface တက်ဘလက်
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးထုတ် ကွန်ပြူတာ ကိုင်ထားတဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် စတိဗ် ဘောမာ
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီကနေ Surface တက်ဘလက် လက်ကိုင် ကွန်ပြူတာ ထွက်လာမယ်လို့ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့က ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် လော့စ် အိန်ဂျလိစ်မှာ ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Touch screen အသုံးပြုထားတဲ့ ဒီတက်ဘလက်မှာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ ထွက်လာတော့မယ့် windows 8 OS ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ကွန်ပြူတာ ဦးနှောက်လို့ ခေါ်တဲ့ Processor အပိုင်းမှာတော့ intel ဒါမှမဟုတ် ARM processors တို့ကို အသုံးပြုထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် အက်ပဲလ် ရဲ့ လက်ရှိ အရောင်းရဆုံး iPad လက်ကိုင် ကွန်ပြူတာကို အတိအကျ
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ မြေမြှုပ်မိုင်း အသုံးပြုနေဟု ဆို
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ။ ။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုများသည်
မြေမြှုပ်မိုင်းများအား အသုံးပြုနေကြသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း မြေမြှုပ်မိုင်း စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (the Landmine Monitor) က ကြေညာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ထိုအဖွဲ့မှာ မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် အတွဲလိုက် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောဗုံး (cluster bomb) များ အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍
လေ့လာ စောင့်ကြည့်နေသော သုတေသန အဖွဲ့တခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် အပတ်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က မြန်မာနိုင်ငံသည် မိုင်းပိတ်ပင်ရေး စာချုပ် အပါအဝင် အခြားလက်နက် ရုပ်သိမ်းရေး စာချုပ်များကို လက်မှတ်ထိုးရန် အလေးအနက် စဉ်းစားနေသည်ဟု
အပြန်အလှန် မျက်နှာမြင် ပြောဆိုနိုင်သော အင်တာနက်ဖုန...
Online ပေါ်မှာ ထိပ်ဆုံး သီချင်း ၁၀ဝ ကို တိုက်ရိုက် ...
ယောကျာ်းလျာများနှင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာ လိင်ဆက်ဆံခြင်း...
ဘန်ကောက် ဆေးရုံကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဆေးရုံခွဲ...
Animation နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ video သင်ခန်းစာတွေကို အခမဲ...
Interview with Actor Ye Deight about his Convertio...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီ...
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ မြေမြှုပ်မိုင်း...